अमिताभ बच्चन अस्पतालबाट डिस्चार्ज – Khabar Silo
मुम्बइ। बलिउडका दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पछिल्लो चार दिनदेखि मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका बच्चनलाई शुक्रबार साँझ अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो ।
नियमित चेकअप भन्दै उनलाई मंगलबार बिहान ३ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनलाई लिन पत्नी जया र छोरा अभिषेक पुगेका थिए ।
यसलाई नियमित चेकजाँच भनिए पनि बिहान तीन बजे अस्पताल किन लगियो भन्ने बारे यथार्त जानकारी अझै बाहिर आएको छैन । अहिले अमिताभको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको बताइएपनि अस्पतालले कुनै नोटिस जारी गरेन ।
अक्षय कुमारको ‘मिशन मंगल’ दुईसय करोड क्लबमा
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारद्वारा अभिनित चलचित्र ‘मिशन मंगल’ दुई सय करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ ।राम्रो प्रदर्शन जारी राखेको उक्त फिल्मले हालसम्म भारतमा मात्रै दुई सय करोड भारुमाथिको कमाइ गरेको छ । मिशन मंगलको सानदान कमाइले एक पटक फेरि अक्षय कुमारलाई बक्स अफिसको खेलाडी साबित गरिदिएको छ ।
२९ औँ दिनमा दुई सय करोड कमाएर अक्षय कुमारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिट फिल्को रुपमा सावित गरि दिएका छन् ।मिशन मंगल भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ९इसरो० को मंगल अभियानको सत्य कथामा आधारित छ ।चलचित्रमा अक्षयसँगै विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा र शरमन जोशी मुख्य भूमिकामा छन् ।
Posted on August 23, 2021 Author khabar silo
एजेन्सी । वनजंगलमा सजिलै पाइने, निगुरो बनाउन सजिलो हुने, खादा स्वादिलो हुने निगुरो स्वास्थ्यका लागि पोषिलो निगुरो पूर्ण अर्ग्यानिक सब्जी, निगुरो । कति गुणी निगुरो ? हुन त अहिले सहरी क्षेत्रको करेसाबारीमा निगुरो रोप्ने चलन छ । यद्यपि यो वनजंगलमा सजिलै पाइन्छ । खासगरी बर्खायाम सुरु भएसँगै निगुरो खोज्ने, टिप्ने गरिन्छ । गाउँघरमा त निगुरोले […]
के-के हुन त मानिसलाई भिन्डी खाँदा हुने फाइदाहरु ?
Posted on June 18, 2021 Author khabar silo
भिन्डीमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । यो राम्रोसँग पच्छ र यसले पाचन प्रक्रियालाई पनि बलियो बनाउँछ । तसर्थ भिण्डीले निम्नानुसारका फाइदाहरु गर्छ : -भिन्डी खानाले शरीरमा सुगरको मात्रा नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ । मधुमेहका रोगीलाई यो लाभदायक हुन्छ । -गर्भवती महिलाले भिन्डी खानाले भ्रूणको दिमागको विकास राम्रो हुन्छ । साथै, भिन्डी खाँदा गर्भ तुहिने जोखिम पनि […]
जवानीमै आएको अनुहारको पोतोले लज्जित हुनुपरेको छ ? फिटकिरीको प्रयोगले यसरी हटाउनुहोस्
Posted on May 19, 2021 Author khabar silo
सुन्दर देखिने रहर सबैको हुन्छ, अझै अनुहार राम्रो बनाउने चाहाना सबैको हुन्छ र अनुहार चम्किलो र दागधब्बा रहीत बनाउन हामी धेरै मेहेनत पनि गरिरहेका हुन्छौ । अनुहारका लागि हामी महँगा कस्मेटिकहरुको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । अझ अनुहारमा आउने चायाँ, पोतो र दागधब्बा आयो भने अनेक उपाय खोज्न थाल्छौ जसको कारण अनुहार झन् विग्रीने खतरा हुन्छ […]